Umfuyi - kuyinto umsebenzi lasendulo kabani izimpande kuya phezulu nokulima kanye ranching. Ngenxa kulo msebenzi engavamile sabona ukukhanya ezinkulungwane kwezinhlobo ezintsha zezilwane, ngisho nangokwengeziwe - izitshalo. Futhi ukuvumela abalimi yokuqala nokuqonda okuncane mayelana biology nofuzo, umsebenzi wabo uye wadala isisekelo esiqinile ukuvela isayensi lonke.
Ngakho ake baqonde ukuthi yini namuhla umfuyi: ubuthishela noma mhlawumbe ubizo? Indlela efanele ingabe ngezinto ezingokoqobo lanamuhla? Futhi lokho izingibe bangase balindele umuntu oye wanquma ukufunda akusiyo neze umsebenzi olula?
abalimi Russian, isimiso, kanye ongoti angaphandle, - ke ngokuyinhloko ososayensi. Umgomo wabo oyinhloko - yokuthuthukisa nezinhlobo ezihlukahlukene eziphilayo. Ngokwesibonelo, bakwazi ukuletha entsha, uzinze, isibonelo, izifo, izinhlobonhlobo amazambane noma ama-eggplant.
Nokho, asikho isidingo sokukholelwa ukuthi abalimi benza izitshalo kuphela. Ububanzi yabo ubanzi kakhulu futhi ahlukahlukene xaxa. Ngakho ke bawela kwezinhlobo ezahlukene izilwane, ukuze alethe sekuvele uhlobo olusha. Abazalanisi nazo ukusebenza lamagciwane, yiqiniso lelo, lokhu kucwaninga nzima nakakhulu futhi kuyingozi.
Mhlawumbe kufanele uqale neqiniso lokuthi ngaphandle kwalezi ochwepheshe izwe belingaba khona akufani sasivame ukumbona. Ngoba sibonga kubo ukuthi kukhona izinhlobo eziningi zemithi yezithelo kanye nezinye izitshalo, baletha izinhlobo ezintsha ezifuywayo. By endleleni, uma ngaphambili ukubukeka kwezinhlobo ezintsha kwakuminyene ngengozi kuka umphumela umzamo womuntu, kodwa namuhla izinto zihluke kakhulu.
Manje umfuyi - umuntu ofanelekayo ongenza izimangaliso. Kuphela kuleli shumi leminyaka elidlule baye asethuthukile kuka 1,000 izinhlobo likakolweni mayelana 100 zama-amagonandoda amnandi. Kusukela manje lezi izitshalo nemithi angakhula kahle ngokulinganayo kuzo zombili sezulu nesasehlobo.
Uba kanjani umfuyi?
Umfuyi - ubuthishela okudinga imfundo ekhethekile. It ingatholakala ukubhalisa omunye amanyuvesi wezwe wezolimo. Uzokwenza kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi kunzima balukhulume.
Ngokuhamba yonke inkathi abafundi isifundo kuyodingeka bahlolisise zonke izici ukuthuthukiswa eziphilayo. Ngenxa yalokho, isidingo sijulise ulwazi in eyala efana biology, i-chemistry nofuzo.
Lokunye lokubaluleke kakhulu izinga sangaphakathi Uchwepheshe esizayo. Ukuze aphumelele ebhizinisini labo, umfuyi kumele akwazi "lokubheka isikhathi esizayo," sikulindele Imiphumela obuphathekayo imisebenzi yayo. Wabuye Kumele ube kohlaziyo ingqondo, ukuze kalula ukufeza izibalo nokuguquguquka kwezwi zofuzo. Nokho, nokukhuthazela, lapho okufanayo ngaphandle kwakhe. Ngezinye izikhathi umfuyi has ukuzwa ngomunyu izinkulungwane ukwehluleka phambi yalokho okuhle kuyoletha injabulo ukunqoba eside elindelwe.
Kuphi na umsebenzi?
Endaweni ekahle ukuze basebenzele umfuyi iyisikhungo ucwaningo. Kulapha ukuthi unamandla ukumambula amakghonwabo ocwaningweni futhi ucwaningo. Nokho, inkinga iwukuthi hhayi kuzo zonke izigodi uyakwazi ukuziqhayisa isikhungo esifanayo.
Futhi abalimi funa amabhizinisi ehlukahlukene yezolimo. Ngokwesibonelo, emapulazini yangasese, hatcheries, ezivandeni zikakolo, nokunye. Inkazimulo izwe ungaholi, kodwa futhi ungabi elambile.
Izinzuzo nezingozi nebubi mkhakha
Kumele siqale nge yokuthi umfuyi - ngokugxila iwumngcingo. Lokhu kuholela yokuthi abacwaningi bathole ukuthi kube nzima ukuthola umsebenzi, ikakhulukazi hhayi yephrofayela lehlosiwe. Kwenzeka futhi ukuthi umfuyi wazibonela ibuke endaweni ehloniphekile ekhaya lakho.
Njengoba for izinzuzo, lapho kumelwe aqale acabangele ukuziqhenya nenjabulo wazizwa ososayensi ngesikhathi ukutholakala. Akufanele sikhohlwe inkokhelo obuhle izindleko sakugcina amandla ento edaliwe.
Emsebenzini imiyalelo sokuphepha emsebenzini onjiniyela ukuphepha, imishini yokusebenza
Ukubuthanela ngigeza ngezandla zakhe